Fantaro i Kọ́lá Túbọ̀sún, mampiatrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron’ny 20-26 Marsa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Marsa 2019 15:34 GMT
Sary natolotr'i Kọ́lá Túbọ̀sún.
Mandritra ny taona 2019 ary ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny antserasera, hifandimby ny Afrikana mpikatroka ara-piteny sy ireo mpanandra-teny amin'ny fitantanana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizara ny zava-niainan'izy ireo amin'ny famelomana indray sy amin'ny fampiroboroboana ny fiteny afrikana. Hiresaka momba an'i Kọ́lá Túbọ̀sún (@kolatubosun) sy izay kasainy horesahana mandritra ity herinandro ity ny lahatsoratra.
Kọ́lá Túbọ̀sún no anarako (nanomboka nametraka ireo tsindrim-peo isan-karazany hitoetra maharitra aho tamin'ny taona 2015 taorian'ny namoahanay ny rindrambaiko mpanamarika tsindrim-peo maimaimpoana ho an'ny fiteny Yorùbá/Igbo ho an'ny Mac sy Windows). Mpahay teny aho ary tia manoratra (mirona amin'ny fanoratana fitsangatsanganana, fanoratana isan'andro ary ny poezia). Mpampianatra ambony ao amin'ny Miles Morland aho amin'izao fotoana izao, miasa manao boky tsy tantara foronina, raha mitarika ekipa ao amin'ny YorubaName.com manadihady momba ny fiteny roa, fanaovana rakibolana, fitaovana fandraketan-tahiry, ary ny asa iray aha ao amin'ny Google miompana amin'ny Fizorana mankany amin'ny Fiteny Voajanahary.
Niaritra fihemorana, tahaka ny ankamaroan'ny fiteny nizeriana, noho ny fihisaran'ny toekarena tamin'ny fiandohan'ny taompolo 80 ka hatramin'ny faramparan'ny taompolo 90 ny Yorùbá. Nitsahatra ny famoaham-boky aman-gazety tamin'ilay fiteny, ary maro ny ray aman-dreny no nihevitra fa ny fampianarana amin'ny teny anglisy manokana ihany no lalana mankany amin'ny fahombiazana, ka dia nitsahatra tsy niteny ny tenindrazany intsony ry zareo tao an-trano. Izany rehetra izany mbola miaraka amin'ny tsy firaharahian'ny mpanao lalàna mandra-pahatongan'ny aterineto hanampy ompa indray amin'ilay ratra, raha hiteny. Tsy betsaka no nivoaka an-tserasera amin'ilay fiteny hatramin'ny vao haingana, tamin'ny fahatongavan'ny tolotra BBC amin'ireo fiteny nizeriana, ary talohan'izany ny YorubaName.com sy ireo sehatra hafa vitsy. An-tserasera indray, sarotra ny manoratra amin'ilay fiteny satria tsy nisy ny fitaovana maimaimpoana hamiharana ny tsindrim-peo amin'ny Yorùbá, izay zavadehibe manoloana ny mety ho fifangaroan-teny, ary eo ihany koa ireo teraka tanatin'ny taonjato izay nitombo tanatin'ny fahabangàna amin'ny fahalalàna ilay fiteny ary tsy mahita izay antony hampiasana azy. Ka indro izahay tonga amin'ny ambaratonga iheverana fa atahorana na mety ho trà-doza ireo fiteny zanatany rehetra anay. Ny tiako lazaina dia hoe tsy fantatray akory hoe firy avy moa sisa no miteny amin'ny fiteninay tsirairay avy.
Mikasa aho ny hiresaka sy hieritreritra amin'ny alalan'ireo fanamby misy amin'izao fotoana amin'ny fampiasàna ny fiteny, ny fomba fisaina, ary ny fametrahan-tahiry eto amin'ny kaontinanta, ary hampiely ny fandrosoana sasany amin'ny asanay, ary ireo kinasa amin'ny hoavy. Manantena ihany koa aho ny hahita olona manao zavatra mitovy aminay any amin'ny faritra hafa ato amin'ny kaontinanta, ary hiditra amin'ireo resaka manana ny lanjany momba ny asanay sy ny lalan-kizoranay.
Nanomboka tamin'ny tena manokana izany: tsy afa-nametraka marika tsindrim-peo tamin'ny voambolana sy tamin'ny anarako aho. Ary arakaraka ny hieritreretako mangina no ahatsapako fa tsy hiraharaha mihitsy ireo olona manana andraikitra amin'ny tranonkala sy ireo rindrambaiko hafa, satria tsy maintsy misy idiran'ny varotra hatrany ny fanavaozana ataon-dry zareo. Saingy ankehitriny, rehefa nanana izany nihoatra ny folo taona, dia mavitrika aho ho an'ny vondrom-piarahamonina. Olona an'arivony sy fiteny an'arivony no mety ho avotra amin'ny alalan'ny fitaovana sy vahaolana nomerika. Misy fiantraikany ara-toekarena ho anay amin'ny maha-vahoaka anay. Raha afa-mampiasa milina fakam-bola amin'ny fiteny ao an-toerana ianao, dia hametraka ny volany ao amin'ny banky ny olona miteny amin'izany fiteny izany, ary ho tafiditra ao anatin'ny tontoloben'ny toekarena nomerika. Raha afa-manangana fitaovana ho an'ny olona manana fahasembanana isika, izay afa-miteny azy ireo amin'ny fiteny ao an-toerana — na ahafahany miteny amin'ilay fiteny ao an-toerana — dia hahatsapa tena ho tafiditra kokoa ao amin'ny fiainana maoderina, ao amin'ny fiaraha-monina, ry zareo. Ka mazoto aho satria fiainana ny fiteny. Mampahery antsika rehetra ny manome hery ny fiteny. Saingy ambonin'izany rehetra izany, mazoto aho noho ny fahafinaretana azoko amin'ny asa izay ataoko.
Manantena aho fa tsy hoe tafavoaka velona ihany io fa hahatapatapaka — any amin'ny sehatra maro tahaka ny ataon'ny teny anglisy sy ny fiteny manerantany hafa amin'izao fotoana izao.